तपाई पनि मलेसियामा हुनुहुन्छ ? सावधान ! पक्राउ परिएला, यो पढनुस् ! – Rastriyapatrika
तपाई पनि मलेसियामा हुनुहुन्छ ? सावधान ! पक्राउ परिएला, यो पढनुस् !